Home Wararka Musuq Maasuqii MW Farmaajo & RW Kheyre oo sababay hakad ku yimid...
Musuq Maasuqii MW Farmaajo & RW Kheyre oo sababay hakad ku yimid shaqooyinkii ciidamada & shaqaalaha
Tan iyo markii uu xukunka la wareegay MW Farmaajo waxaa dowladda Soomaaliya deeq ahaan loo siiyay adduun dhan $180 Milyan oo doollar, taasoo badankeeda aay bixisay dowladda Qatar halka dowladaha Turkiga & Kenya aay bixin jireen lacago gaar ah bil walba.
Lacag la’aan, maamul xumo, iyo wal walka xoog leh oo ku aadan mustaqbalka Soomaaliya ayaa ka taagan magaalada Muqdisho, kaas oo ay dareemayaan dadka xog ogaalka ah iyo kuwa ay saameysay mushaar la’aanta ee shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qaranka.
Xafiisyada dowladda qaarkood ee lacag la’aanta ah iyo shaqaalaha iyo ciidamada aan qaadan mushaar ayaa lugta geliyay bishii 6-aad, taas oo saameyn ballaaran ku yeelatay shaqooyinka qaranka inkastoo aysan wali banaanka u soo bixin.
Ugu yaraan 10 wasaaradood oo ka tirsan Xukuumadda RW Kheyre, xafiisyada taliyaasha Ciidamada iyo xafiisyada Maxkamadaha dalka ayaa laga goostay lacagtii ay qaadan jireen ee socodsiinta shaqada qaranka (running coast).
“Xafiiska Taliyaha Ciidamada Difaaca, Wasiirka Gaashaandhigga iyo Xafiiska Agaasimaha Wasaaradda Difaaca, bilooyinkaan ma qaadan lacagtii socodsiinta shaqada waana xaqiiqo aan dul tagay”, Waxaa sidaasi Caasimada Online u sheegay qof ka mid ah shaqaalaha wasaaardda difaaca.
Wasaaradaha qaar ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay in la dejiyay hal dhismo si ay ugu wada-shaqeeyaan korontada iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah shaqada. Sidoo kale shaqaalaha KMG ah ee wasaaradaha iyo xafiisyada dowladda ayaa kuu sheegaya in bishaan wixii ka dambeeya aysan sugeynin gunadii ay qaadan jireen maadaama aysan ku jirin liiska shaqaalaha Rayidka ah ee Soomaaliya.
Mushaarka ama gunnada shaqaalaha KMG ah ayaa bishaan lag bixiyay Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya ,balse lama oga halka ay ku dambeyn doonto bilooyinka kale waxaana la sheegay in waqti dambe ay heleen bishaan halka markii hore ay isku wati qaadan jireen shaqaalaha dhan.
Dowladda Soomaaliya ayaa hore lacagta uga joojisay Warbaahintii qaadan jirtay laa-luushka, taageerayaasheeda Facebook iyo xafsiiyadii Dowladda waxaana hada lays waydiinayaa waxa xiga ee dhici kara.
Shaqsiyaadkii qaadan jiray lacagta ee dowladda taageera ayaa durba bilaabay in ay raali gelin ka bixiyaan waxyaabihii ay sameeyeen, halka qaar kalane ay bilaabeen in ay dacaayadeeyaan Xukuumadda balse waxaa jira 8 qof oo la sheegay in ay wali u soo dhacdo lacagta kuwaas oo wada dacaayadii ay ka fidin jireen siyaasiinta Soomaaliyeed.